Polycarboxylate Superplasticizer / PCE Factory - China Polycarboxylate Superplasticizer / PCE Manufacturers, Suppliers
JS-104 Onyinye polycarboxy ...
JS-104 Onyinye polycarboxylate Superplasticizer 37.5% (Mmiri mbenata ụdị)
JS-104 bụ ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ anyị kachasị ọhụrụ na nyocha na ngwaahịa, na-eji ọhụụ ọhụrụ polyether isii carbon monomer. Typedị ngwaahịa a nwere ọnụego mbelata mmiri dị elu, nke dị elu karịa JS-103, ma nwee arụmọrụ nchekwa slump dị elu.
BT-302 Polycarboxylate superplasticizer 40% (High slump retaining ụdị)
BT-302 bụ ọgbọ ọhụrụ nke na-ahapụ ngwa ngwa na mmanya na-ejide nne na-egbu egbu site na TPEG site na polymerization na-agbanwe agbanwe n'efu, a na-ewebata otu ọhụụ na-ahapụ ntọhapụ n'ime njikọ.
BT-303 Polycarboxylate Superplasticizer 40% (slowdị nkwụsị nwayọ nwayọ)
BT-303 bụ ọgbọ ọhụrụ nke na-ahapụ ngwa ngwa ma na-ejigide mmanya na-egbu egbu sitere na TPEG site na polymerization na-agbanwe agbanwe n'efu, a na-ewebata otu ọhụụ na-ahapụ ntọhapụ n'ime njikọ.
Nke a bụ ọgbọ nke atọ dị elu arụmọrụ na eco-friendly poly carboxylic acid plasticizer, mepụtara site na ụlọ ọrụ anyị na-ezubere iche na powdered plasticizer. A na-edozi ntụ ntụ site na teknụzụ na-agba ọkụ na-agba agba. Ngwurugwu ntụ ntụ dị n'otu nha, nwere ezigbo mmiri, mmiri dị ala,